DAAWO: ”Rakaabka halis baa la geliyay!” – Fly Dubai oo ka cabanaysa khaladaad dhanka hagitaanka ah oo ka jira Gegada Hargaysa! (Warqad la helay) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DAAWO: ”Rakaabka halis baa la geliyay!” – Fly Dubai oo ka cabanaysa...
DAAWO: ”Rakaabka halis baa la geliyay!” – Fly Dubai oo ka cabanaysa khaladaad dhanka hagitaanka ah oo ka jira Gegada Hargaysa! (Warqad la helay)
(Hargaysa) 03 Nof 2019 – Sharikadda Dayuuradaha Fly Dubia ayaa dacwad ka gudbisey dadka haga Garoonka Dayuuradaha Hargaysa kaddib markii 3 jeer macluumaad khaldan la siiyay.
Shirkadda Fly Dubai ayaa ku doodday in dhowr mar halis la geliyay rakaabka saaran dayuuraddaasi, iyadoo xitaa mar u weecatay dalka Jabuuti.
Khaladaadka farsamo ee halista ah ee la galay sida ay sheegtay waxaa ka mid ah in loo fasaxay inay soo degto, jeer aanu diyaar ahayn dhabbaha garoonku.
Shirkadda ayaa si cad ugu sheegtay maamulka Somaliland inuu garoonkani ku yaallo dalka Somalia, taasoo ah arrin aanu jeclaysan doonin maamulkaasi oo sheegta inuu ka go’ay Somalia, waloow sharciyan aanay jirin cid taa aqoonsani.
Maamulka Somaliland ayaa beri dhowayd eryey hagayaal ay mushaharkooda bixinaysay DF Somalia, isla markaana ay tababar siisay hay’adda duulista iyo gaadiidka hawada QM ee ICAO, taas ayaana loo badinayaa sababta cilladahan keenaysa.
Arrintan ayaa haddii aan deg deg wax looga qaban keeni karta in ay dayuurado badani ka weecdaan.
Previous articleDERBI LA DARDARAY: Dadka tahriibka ah oo la yimid qaab ay uga gudbaan derbiga laga dhisay xadka Mexico & Maraykanka + Sawirro
Next articleGUUXA DADWAYNAHA: Aragtida dadwaynaha Dhuusamareeb & Guriceel ee xiisadda DF & Ahlu Sunna (Dad noo warramay)